Afaan Oromoo : Gulantaan barnootaa jijiirame Afaan barnootaa ni jijjiir? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAfaan Oromoo : Gulantaan barnootaa jijiirame Afaan barnootaa ni jijjiir?
Afaan Oromoo : Gulantaan barnootaa jijiirame Afaan barnootaa ni jijjiiraa?
(bbcafaanoromoo)—–Mootummaan gulantaa barnootaa haaraa hojiirra akka oolu ifa baaseera. Gulantaan dokimantii ‘RoadMap’ keessaa bahe kuni Afaan Oromoo ni miidhaa?
Waggaa dhufu irraa eegale akkaataa imaammata barnootaa haaraatti qormaanni kutaa jahaffaa akka eegaluufi qormaanni barnoota kutaa 10 akka hafu ibsameera.
Kunis, dhimma rakkoo qulqullina barnootaa Itoophiyaa keessatti yeroo hedduu ijoo dubbi ta’e hiikuuf yaadamee akka ta’e Hogganaan Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr Tolaa Bariisoo himaniiru.
Maaliif barataan tokko digirii argachuuf waggaa afur akka baratu ta’e?
Murteen akkanaa barnoota barattoonni afaan dhalootaa isaaniin baratan irratti dhiibbaa akka hin qabne dubbatu aanga’aan kun.
Kanneen imaammata kanaan ifa ta’an keessaa barnoota digiriif barataan tokko yoo xiqqaate waggaa afur baratuu qaba kan jedhudha.
Kan biraafi dhihoo ifa ta’e immoo gulantaan caaseffama barnootaa haaraa ifa ta’edha.
”Roadmap” Ministeera Barnootaan qophaa’e maal of keessaa qaba?
Gulantaan haaraa maaliif barbaachise?
Gulantaan barnootaa haaraa bahe barnoota bakka tokkootti kuufame gargar fageessuufi barattoonni akka hin rakkanne yaadameeti jedhan Dr Tolaan.
Kunis, barnoonni yunivarsiitii ture gara sadarkaa lammataatti gadi bu’uun isaa kanneen sadarkaa jalqabaa baratan irratti dhiibbaa waan fidef isa fooyyeessuuf yaadameeti.
Qormaata baay’isuun qofti qulqullina barnootaa fiduu dandeessisaa laata?
Sababni inni biraa immoo, ‘xiyyeeffannoon barnootaa beekumsa (‘cognitive’) irratti kan xiyyeeffateefi ogummaa waan hanqatuf beekumsa, dandeettiifi ogummaa waan hammatu akka ta’uufi,’ jedhan.
Wantoota ‘Road Map’ barnootaan wanti itti galame keessaa tokko barnoota oolmaa daa’immanii mootummaan akka dirqamaatti akka eegaludha.
Kana dura gara caalu abbootiin qabeenyaa keessumaa magaalaa keessatti kan irratti hojjetan yoo ta’u kunimmoo baadiyaatti waan hin turref dorgommiin akka hin jiraanne godheera jedhan.
”Ilmaan qonnaan bulaa baadiyyaa jiran, Ijoolleen magaalaa oolmaa daa’immanii warra dhaabbilee dhunfaatti baratan dorgomuuf carraa qabu jechuudha. Kuni waan gaariidha jedheen ilaala.
Afaan Oromoo ni miidhaa?
Gulantaa haaraan barnoonni kutaa 1 – 8 sadarkaa tokkoffaa jalatti kan ilaalamu yoo ta’u 1-6 marsaa duraa 7 fi 8 ammoo kan jiddugaleessaati jedhu Dr Tolaan.
‘Ijoolleen kutaa jalqabarraa kaasanii afaan dhalootaafi afaan Ingiliziin baratu, kan jedhan Dr Tolaan kanaanis, afaan irratti dhiibbaa homaatu hin qabu jechuun dubbatu.
”Gama Afaanii wanti jijjiirame hin jiru. Gosa barnoota hundaanuu kutaa 1 – 8 bararattoonni Afaan Oromoon baratu.”
”Kuni ittuma fufa malee namni kanaan yaadda’uu hin qabu. Gulantaan jijjiirama jechaan Afaan Oromoo hanga kutaa jaha ta’a wanti jedhu hin jiru. Namni kana ifatti baruu qaba,” jedhan.
Haa ta’u malee, qormaanni kutaa kudhanii hafuurraan kan hafe, ”Qormaata kutaa jahaafi kutaa saddeet naannootu qora. Duraanis ammas kutaa saddeett naannootu qora. Kan adda ta’e kutaa jaha irratti ni qoramu,” jedhan.
Miidiyaaleen biyya keessaa dhimma kanarratti gabaasa addaa qabatanii bahan.
Akka gabaasni ETV jedhutti qormaatni naannoo kutaa 8’tti kennamaa ture kutaa 6’tti gadi bu’ee kan kutaa 8 qormaata biyyaalessaa ta’a.
Dr Tolaan garuu qormaata lamaanuu kan kennu naannoodha jedhu.
“Oromummaatu mana amantaa kana keessatti kabajaa fi ulfina dhabe” -Luba Balaay Mokonnin
– Gulantaan barnootaa jijjiirame Afaan barnootaa ni jijjiiraa?
Kun Wixinee (draft) dha. Wixinee namni katabu waan qalbiin isaa hawwitu keessa galchuu mala. Kan wixineerra jiru mara imaammata ta’ee ni mirkanaawa/ dhugooma jechuu moti. Marii irratti kana baasi san baasi jedhanii keessaa baasuun waanuma jiraa ti. Woraabessaan foon maaliif kajerlte? hin jettuun irraa fageessitee akka hin nyaanne dhooggita malee!
The government who denies the right to language- where by learning in ones own is one- is violator and individuals fighting for this freedom are humans. Individuals without freedoms are mere animals. Leave alone at regional levels, the language policy of Ethiopia needs reconsideration and reconciliation.
Freshman courses starting from 2012 EC academic year for all departments.
የ History ጉዳይ ግን አሳሳቢ ነው